Health & Beauty Archives - Page2of 122 - Lifestyle Myanmar
လက်တွေကို ချောမွေ့နုပျိုစေမယ့် နည်းလမ်း (၈)ချက်
ပန်းကန်ဆေး၊ အဝတ်လျှော်၊ အပင်စိုက်တဲ့အခါ (ဒါမှမဟုတ်) လက်ကို cleaning detergents (သို့) ဓါတုပစ္စည်းပါတဲ့ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါတိုင်း ရာဘာလက်အိတ်တွေ သေချာဝတ်ပါ။ ဒီသာမာန်အိမ်မှုကိစ္စတွေက သင့်လက်ရဲ့နုပျိုမှုနဲ့ နူးညံ့မှုတွေကို ဆုံးရှုံးစေလို့ပါ။ သင့်တော်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုမရှိရင် အရေးအကြောင်းတွေ အရင်ဆုံး ပေါ်လာတတ်က လက်တွေဆိုတာ အမျိုးသမီးအတော်များများ မသိကြပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးက လက်ရဲ့အစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးဖို့နှင့် အစိုဓါတ်မဆုံးရှုံးအောင် ကာကွယ်ဖို့...
အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေ အသုံးပြုတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် (5)မျိုး
ဒီနေ့မှာတော့ ပျိုမေတို့အတွက် အိန္ဒိယမှ အလှဆုံးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရှာဖွေထားပါတယ်နော်။ ၁။ အသားအရေကြည်လင်တောက်ပစေဖို့အတွက် နနွင်း Miss World ၁၉၉၄ဆုရ Aishwarya Rai Bachchan ဟာ အသက် ၄၇နှစ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် အသားအရေလှပပါတယ်။ သူမရဲ့အသားအရေတောက်ပမှု လျှို့ဝှက်ချက်က ကုလားပဲမှုန့်၊ နို့ခရမ်နှင့် နနွင်းအနည်းငယ်ကို ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပြီး ပုံမှန်လိမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ နနွင်းရဲ့...
သံဓါတ်က ဟောမိုဂလိုဘင်နဲ့ သွေးနီဆဲလ်တွေ ဖွဲ့စည်းရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော trace element တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်သွေးထဲမှာ သံဓါတ်ပမာဏကောင်းရှိနေခြင်းက ကျန်းမာသော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ သံဓါတ်ပမာဏ ကျဆင်းတဲ့အခါ တစ်သျှူးတွေက အောက်ဆီဂျင်အလုံအလောက် မရတော့ပါဘူး၊ ဒါက အားနည်းခြင်း၊ မောပန်းခြင်းနှင့် သွေးအားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်မှာ သံဓါတ်ချို့တဲ့နေကြောင်း ပြောပါက သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကို...
နေ့ဘက်မှာထက် ညနေခင်းဘက်မှာ ဘာကြောင့် ရေပိုချိုးသင့်တာလဲ?
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေက တစ်နေ့လျှင် ငါးမိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်အထိ ရေချိုးပေးဖို့ အကြံပြုကြပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက နေ့ဘက်မှာ ရေချိုးရတာကို နှစ်သက်ပြီး တစ်ချို့မှာတော့ ညပိုင်းတွေမှာ ရေချိုးရတာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညပိုင်းမှာ ရေချိုးတာက အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အင်မတန်အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။ ဒီကနေ Lifestyle Myanmar ကနေ မျှဝေပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကလည်း ညဘက်မှာ ရေချိုးတာက သင့်အတွက်...
ဒူးတွေသန်မာဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် သိကောင်းစရာ (6)ချက်
ဒူးတွေက ကိုယ်ခန္ဓာကို ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အဆစ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် သန်မာတဲ့ ဒူးတွေက သင့်အားလိုအပ်တဲ့ ဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးပြီး တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွေ့လျားခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့က ကျန်းမာပြီး ဒေါင်ဒေါင်မြည်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒူးတွေ ကြံ့ခိုင်ဖို့ အရမ်းအရေးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ဒူးတွေကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့်အချက်တွေရယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ရယ်ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒူးတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများစွာကို ခံရနိုင်တာကြောင့် သူတို့ကို ခြေရာခံဖို့က ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေက ရုတ်တရက်လည်းဖြစ်နိုင်သလို မထင်မှတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သတိမပြုမိတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးရနေပြီလို့ ဆိုလိုနိုင်တဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာ (၈)ချက်ပါ။ ၁။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားပိုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် အသားပိုတွေက ဟော်မုန်းပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်း (သို့)...
တစ်နေ့ကို ဆီးသီးခြောက် ၆လုံးစားပေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်သော ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှု (၈)ခု
ဆီးသီးက အစာချေဖျက်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း၊ အရိုးတွေနဲ့ သွေးကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနှင့် သင့်အားကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီအသီးခြောက်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တနေတဲ့ ကျန်းမာသော အဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိဖို့ တစ်နေ့လျှင် ဆီးသီးခြောက် ၆လုံးခန့် စားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁။ သူတို့က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ် ဆီးသီး ၁၀၀ ဂရမ်မှာ...
လက်သည်းအရှည်ကြီးမထားဘဲ တိုတိုညှိညှိလက်သည်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ချစ်စရာလက်သည်းပုံဖော်နည်းများ (30) ခု
ပျိုမေတို့ရေ….။ ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးမဆို ခေါင်းကနေ ခြေဖျားအထိလှချင်ကြတာချည်းပါပဲနော်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့် အသားအရေလှပဖို့ အရေးကြီးသလို ဒီလိုမျိုး အနုအရွလေးတွေကိုလည်း သဘောကျကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်လို့လည်း ရပါတယ်နော်…။ 1234567 8910 11 12 \_ 13 14 15 16...
ဆံပင်ဖြူတွေ ပြန်နက်လာဖို့အတွက် သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ?
လူတွေမှာ ဆံပင်ဖြူတယ်ဆိုတာ လွန်ဆန်လို့မရတဲ့ သဘာဝတစ်ခုပါပဲ။ သို့သော် အသက်၄၀ကျော်လာရင် ဆံပင်ဖြူလာတယ်ဆိုပေမယ့် အချို့တွေမှာ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံပင်ဖြူလာတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်မှာ ဆံပင်ဖြူတွေရှိလာတာကို premature grey hair လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အရ ဆံပင်ဖြူသူတွေအတွက် သိပ်ကိစ္စမရှိပေမယ့် လူငယ်တွေအတွက်တော့ ဒီအရာကအိပ်မက်ဆိုးသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေက တခြားသူတွေထက် စောစောစီးစီး ဆံပင်ဖြူကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? အသားအရောင်လိုပဲ ဆံပင်အရောင်ကို...
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ခေါင်းကိုက်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း (၄)ခု
ခေါင်းကိုက်တာကို အမြန်ပျောက်ချင်ရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဆေးမှ မသောက်ဘဲ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှာဖြစ်စေ၊ သွားရင်းလာရင်းဖြစ်စေ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို အမြန်သက်သာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေပါ။ ၁။ သင့်မျက်နှာပေါ်က ဒီ point ၄နေရာကို ဖိအားပေးပါ သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ ဒီ point ၄နေရာကို ဖိထားပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ နာကျင်မှု သက်သာလာတဲ့အထိ...